Nezvedu - Shenzhen Primes Technology Co., Ltd.
Shenzhen Primes Technology Co, Ltd. Yakagadzwa muna2012 yakabatana 3D Filament muna 2014, CCTREE inyanzvi ye 3D yekudhinda zvinhu, ine fekitori nharaunda ye3,900 mativi emamita uye neepamberi michina yekugadzira, SeR & D uye bhizinesi rekugadzira rinopa zvigadzirwa nemhinduro yeketani rese remaindasitiri, CCTREE parizvino inemiridzo isu tine mitsara misere yekugadzirwa kweFilament, 2 mutsetse wezvinhu zvakaburitswa nemimwe michina yakati wandei inobuda pagore ye500Tons. Zvigadzirwa zvakapatsanurwa kuita matatu nhanho: chikamu cheindasitiri, chikamu chebhizimusi uye nharaunda, kusangana nezvinodiwa zvemhando dzakasiyana dzevashandisi.
Zvichakadaro, CCTREE ndeimwe yekutungamira inogadzira muChina. Zvigadzirwa zveCCTREE zvinotumirwa kune dzinosvika zana nyika nenzvimbo dzakatenderedza pasirese, zvinowanzo shandiswa mumhuri, dzidzo, kushambadza nedzimwe nzvimbo. Iye zvino takagadzira vanopfuura zana vatengesi vemhando munyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu epamba nekune dzimwe nyika, vanopa yakanakisa kumhara sevhisi kune vashandisi vekupedzisira.
Kuti uve weFekitori Fekitori, yakabudirira kugadzira mhando dzakasiyana dzemhando dzekudhinda dze3D dzakadai se ST-PLA, ABS +, HIPS, PA, PC, PETG, PVA, luminous variable, conductive, ASA, Marble-PLA.
Nezve Raw Raw
Yakakwira mhando mbishi zvigadzirwa, senge PLA kubva kuNeightworks (USA) uye ABS kubva kuChimei (Taiwan) are100% nyowani nyowani zvinhu mukugadzira uye neyakaomarara kugadzirwa kwemaitiro ekudzora.
Kubva pamapurasitiki epurasitiki kusvika kumabhegi ekutsvaira, kubva kumavara emafuta kusvika kumabhokisi uye makatoni, isu tinopa OEM masevhisi masevhisi kune zvese zvinogoneka zvinodiwa.
Nezve mhando & Service
Ipa mushure-kutengesa tekinoroji rutsigiro uye mhando vimbiso Kana paine dambudziko remhando yepamusoro, Hapana pembedzo. Hapana kunonoka. Kutsiva kana kudzoreredza kunozoitwa nenguva.Tinotora mutero kubva pakutanga kusvika kumagumo.
CCTREE yakazvipira mukuvandudza, mhando uye kugadzikana, mukutsvaga kwekugadzira yakachengeteka uye yakachena zvigadzirwa zveiyo 3d yekudhinda indasitiri.
Tiri kutsvaga Vagadziri vepasirese neVatengesi, Tinogamuchirwa kuti ubatane nesu!